28th June 2020 | १४ असार २०७७
युवा बहस : राष्ट्रिय राजनीतिमा जबर्जस्ह हस्तक्षेप
सुमन न्यौपाने कोरोना महामारीसँग नेपाल लडिरहेको छ। सरकारले लकडाउनलाई सहजीकरण गर्न विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अर्कोतिर कोरोना संक्रमित कम हुँदै जानुको सट्टा दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार मात्रै ५८६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमितको हाल सम्मकै यो उच्च संख्या हो भने नेपालभरी संक्रमितको संख्या ७ हजार १७७ पुगेको छ।…
07th April 2020 | २५ चैत्र २०७६
विपत्तिका बेला सामाजिक सञ्जाल कसरी चलाउने? कोरोनाको गलत सूचना, तनावबाट बच्न के गर्ने?
महाव्याधि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन घोषित लकडाउनका कारण मानिसहरुको प्रत्यक्ष भेटघाट बन्द भएको छ। यस्तो बेला सामाजिक सञ्जाल सम्पर्क, सूचना आदानप्रदान र सामाजिक अन्तरक्रियाको प्रमुख माध्यम बन्न पुगेको छ। लकडाउनको परिस्थितिलाई सामना गर्न मानिसहरु मध्यरातसम्म पनि सामाजिक सञ्जालमा समय व्यतित गरिरहेको पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा मानिसहरु सामाजिक सञ्जालको भुमरीमा पर्नु स्वभाविक नै हो। कठिन परिस्थितिमा सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह हुने समाचार र…
'यो त त्रासलाई जित्ने समय हो'
सामान्यत: मुल ढोकामा मात्र चाबी लगाउँछौं हामी। अनि हाम्रो यही बानी आमालाई फिटिक्कै मन नपर्ने। यस पटक पनि आउना साथै भन्नुभयो,'सबै कोठाको चाबी लगाउनु पर्छ। तिमीहरु मेरो कुरै सुन्दैनौ।' 'नसुनेको होइन के आमा सबैतिर चाबी लगाउँदा चोरलाई पनि भित्र केके न छ जस्तो लाग्छ। तोडफोड गर्छ। बरु ताला नदेख्दा केही छैन रैछ भन्ने सोच्छ नि', मैले बाठो बनेर जवाफ दिएँ। …
06th April 2020 | २४ चैत्र २०७६
अस्पतालमा डाक्टरसमेत देख्न नपाउने हाम्रो देशमा मानिसहरुले कसरी बुझ्लान् कोरोना
विश्वभरका एघार लाखभन्दा बढी मानिस कोरोना भाइरस संक्रमित भइसके। यस भाइरसकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दो छ। संक्रमण नभएकामा पनि त्रास र पीडा उस्तै। यस भयावह स्थितिले पार्ने मनोसामाजिक प्रभावको पाटो बेग्लै छ। अवस्था नेपालमा पनि केही फरक छैन। यसको लक्षण र असरबारे मानिस जति यस भाइरस र यसको संक्रमणबारे सोच्दै जान्छन् त्यति नै जटिल बन्दै जान्छ बुझाइ। मेरो…
10th March 2020 | २७ फागुन २०७६
कोख, अंगालो र 'थप्पड'
फेब्रुअरी १ तारिख। फिल्म ‘थप्पड’को ट्रेलर सेयर भएर पटकपटक टाइमलाइनमा आयो। नहेरी बस्न सकिनँ। नहेरेको भए हेर्नै पर्ने कुरा छुट्थ्यो। धन्यवाद ती साथीहरुलाई जसले ट्रेलरको चर्चा गरिदिए। श्रीमानले एक थप्पड लगाउँदा आत्मसम्मानमा चोट पर्छ फिल्मकी केन्द्रीय पात्र अमृताको। सहनु अनि अघि बढ्नु स्वीकार्य हुँदैन उनलाई। त्यसैले सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय लिन्छिन्। महिला वकिलकहाँ कानूनी सहायता लिन पुग्छिन् उनी। वकिलले सोध्छिन्- जाबो…
01st February 2020 | १८ माघ २०७६
गणतन्त्रमा 'सवारी शासन', नयाँ 'श्री ५' हरुका लागि सडकमा नै जनता बन्धक!
बिहीबार शहिद दिवस थियो। सरकारले सार्वजनिक विदा कटौती गरेपनि प्राय स्कूल, कलेज बिदा हुने भएकाले गाडीको सास्ती कम होला भन्ने सोचेर म आफ्नै टाइम बिहान ८:३० बजे माइक्रो स्टेसन पुगें। सोचेजस्तै भयो, गाडी चढ्नेको लाइन सुरु भइसकेको थिएन। समयमै अफिस पुगिने सोचेरै दंग परें। हेडफोन लगाएँ अनि गीतमा झुम्न थालें। तर, हामी त आम नागरिक। हामीले देशमा धेरैबेर दंग पर्न पाउने…
26th December 2019 | १० पुष २०७६
तिमीहरु त आकाशमा हुन्छौं, ग्रहण बार्छौ कि बार्दैनौ?
बिहीवार बिहान खण्डग्रास सूर्य ग्रहण हुँदै थियो। सामाजिक सञ्जालमा भने एक साता अघिदेखि नै शास्त्रीय मान्यता भन्दै ग्रहणका बेला बार्नुपर्ने विषय जोडतोडले प्रचार भइरहेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेकाहरुदेखि सर्वसाधारणसम्म अनलाइनका समाचारहरु सेयर गरिररहेका थिए। ग्रहण कुन राशीका लागि ठीक र कुन राशीका लागि बेठीक भन्ने विषयले पनि चर्चा पायो। यस्तै समाचार र प्रतिक्रियाहरु सेयर गर्नेको होड नै चल्यो। म…
17th October 2019 | ३० असोज २०७६
तपाईँ नै खुला आँखाले हेर्नुस् प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्ला दिनमा मिडियाप्रति निक्कै असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनका अभिव्यक्तिमा मिडियाको आलोचना जोडिनु सामान्य हुन थालेको छ। मिडियामाथि आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नु जायज नै होला तर त्यो सत्तामा रहँदा मात्रै कि सधैंलाई? प्रतिपक्षमा रहँदा सत्ताको आलोचनालाई ठीक भन्ने र सिंहासनमा बसेपछि गलत भन्ने चरित्र हो भने त्यो दृष्टिदोषभन्दा अरु केही होइन। यसअर्थमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आँखा परीक्षण गर्ने हो…
हामी यतिखेर पुणेको भेहिकल टेस्ट ट्र्याकमा छौं। फराकिलो ट्र्याकमा हामीसामु छ ह्यारिअर, टाटा मोटर्सको पछिल्लो गाडी। टेस्ट ड्राइभ गर्ने तयारी पूरा भएको छ। दुई बज्न अझै ३० मिनेट बाँकी नै छ। सबै तयारी पूरा भए पनि सेड्युल अनुसार हामीसामु आधा घन्टा बाँकी छ, स्टेरिङ समाउन। कन्ट्रोल रुममा हामी पाहुना। यहाँबाट करिब ३ सय मिटर टाढा ठूलो ट्रक उकालो लाग्दै गरेको…
लामो समयदेखि स्मार्ट स्मार्ट सुनिरहे पनि देख्न भने पाएको थिइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुशासन र समृद्धिका कथा हाल्दा कहिल्यै थाक्दैनन्। थाक्न पनि हुँदैन। तर, कुरामात्र होइन, काम चाहिँ होस् भन्ने हो। त्यसका लागि शुभकामना दिन्छु। सरकारी कामकाज स्मार्ट बनाउने घोषणा, डिजिटलाइज्ड गर्नका लागि बजेट विनियोजन; पत्रकारका नाताले यस्ता समाचार धेरैपटक लेखियो। के वास्तवमा हाम्रा सरकारी अड्डाहरु स्मार्ट बनेका छन्…